Ny labiera misy anao ve sa ny Lager-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Ny labiera misy anao ve sa ny Lager
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 15
Ny labiera dia karazana vokatra misy alikaola vita amin'ny fermentation misy masirasira fa tsy fanadiovana. Ny siramamy mofomamy dia avy amin'ny malt grist isan-karazany toy ny orza sy karazany hafa, miaraka amin'ny hops ho vanim-potoana. Ny tena fotony dia manarona rano, malt, hops ary yeast sns.
Raha lazaina fohifohy, ny fikotranana labiera dia misy ny fametahana, ny fanasan-damba, ny fandrahoana, ny fanamasinana ary ny fitaratra. Mazava ho azy fa ho sarotra kokoa ny pitsopitsony momba ny fizotrany.
Ny fermentation no dingana lehibe indrindra, mandritra izany ny masirasira sy ny maripana no singa lehibe. Tamin'ny fiantombohan'ny tantaran'ny labiera dia tsy voafehy tsara ny masirasira sy ny maripana mioty. Ho an'i Ale, ny masirasira dia miasa eo an-tampon'ny tanky miaraka amin'ny mari-pana manodidina ny 15-24 ℃ sy ny fotoana 3 ~ 21 andro.
Ny "lager" any Alemana dia midika hoe trano fitehirizana na trano fivarotana ary izao no anaran'ny labiera, izay midika fa ny masirasira dia manondras any ambanin'ny fermenter.
Mety hanontany ny sasany ny fomba fanasokajiana labiera. Azo antoka fa mety ny mamaly an'i Ale sy Lager, raha tsy hilaza afa-tsy ireo sokajy. Mendrika ny manamarika fa ny mahasamihafa an'i Ale sy Lager dia mitoetra amin'ny fomba fanamoriana, fa tsy fenitra hitsarana ny kalitaon'ny labiera.
Ny tsiron'ny Lager dia madio tokoa raha i Ale kosa miantehitra amin'ny tsiro hops mavesatra mba hanafenana ny kilemany ary noho izany antony izany dia mahatsikaritra mora foana ny lesoka sy fofona Lager. Ankoatr'izay, ny fanaovana Lager dia mila fepetra lehibe amin'ny trano sy ny fidiovana. Izany no mahatonga ny mpamokatra labiera trano vitsivitsy manao Lager. Na izany aza, ny fanaovana Lager tsara dia afaka mampiseho ny haavon'ny labiera.
Previous: Inona no mamaritra ny loko labiera?
Next: Ianao ve dia mitady Tanjom-pamokarana matihanina eo akaiky eo?